के भन्छन पाँचथरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधी ! « Phidim Today
के भन्छन पाँचथरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधी !
Published on:3December, 2019 7:39 am
अध्यक्ष, फाल्गुनन्द गाउँपालिका
फाल्गुनन्द गाउँपालिकालाई अव कसरी बढाउनु हुन्छ ?
फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा विशेस गरेर यहाँको जनताहरुले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरे पछि यहाँको विकस र संमृद्धी कसरी अगाडी बढाउने भन्ने बिषयमा मैले सोच्ने हो । विकासका कामहरु कसरी अगाडी बडाउने सन्दर्भमा जनताहरुको घरदैलेमा जाँदाखेरी हामीले गरेको विभिन्न प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेको छु । ति प्रतिबद्धताहरुलाई पुरा गर्ने मेरो पहिलो प्रयत्न रहनेछ ।
जस्मा खानेपानि, शिक्षा, स्वास्थय, संञ्चार, यतायात लागयत छन । तिनलाई पुरा गर्नमा मेरो जोडवल रहनेछ । जनताले चाहेको जस्तो फाल्गुनन्द गाउँपालिका बनाउन मैले प्रयत्न गर्नेछु ।
समय थोरै छ कसरी संभव होला यो सबै ?
त्यो त हो तर प्रदेश तथा केन्द्रमा पनि हाम्रो हाम्रो सरकार छ । यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु मन्त्री बन्नु भएको छ । त्यो भएको हुनाले हामीले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न सहयोग पुग्ने छ ।
तपाइलाई जिताउने नागरिकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
यो अवसरमा म सबै मतदातालार्ई धन्यवाद दिन चाहान्छु । मेरो आगामी कार्य यहाँहरुलाई निरास नहुने गरी काम गर्ने हुनेछ । बिशेष गरेर बिकास निर्माणको क्षेत्रमा हामी फड्को मार्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।
वडाध्यक्ष, फिदिम १
निर्वाचन पछि फिदिम १ मा के के गर्नु हुन्छ ?
समग्र फिदिम १ नम्बर वडाको विकास निमार्णका कुरा देखी लिएर, सामाजिक क्षेत्रका कुराहरु, जनताको इच्छा आकाङक्षहरु देखी लिएर, उहाँहरुले चाहेको कुराहरु पुरा गर्न मेरो प्रयत्न रहनेछ । किनभने म लामो समयदेखी सामाजिक क्षेत्रमाकामगर्दै आएको छु । मैले ११ वर्ष देखीनै राजनितिक, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुनले मैले भोली पनि राजनीति मार्फत समाज सेवालाई नै निरन्तरता दिने छु ।
विगतको चुनाव र अहिलेमा के कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?
विगतको दिनमा पुरानो मान्छे हर्क मोक्तान र म विचमा मतदाताले हेर्ने दृष्टिकोण समान थियो । त्यसले गर्दा म भन्दा अग्रज पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा मतदाताहरुले उहाँलाई विस्वास गरेर जिताउनु भयो । त्यसै कारणले गर्दा पनि म थोरै मत अन्तारले पराजीत हुन पुगे । तर अहिलेको अवस्थामा मतदाताको चुतनामा समेत बृद्धी भयो । त्यसैको फलस्वरुप म बिजयी भएँ ।
चुनाव जितिसकेपछि नगरीकहरुले कस्तो उम्मेवदारलाई भोट दिन्छन भन्ने लाग्यो ?
मैले यो वडामा तेस्रो पल्ट टिकट पाएर बिजयी भएको हुँ । यो मलाई पार्टीले विस्वास गरेको छ । म जनताको घर दैलेमा गएर सेवा गर्दै हिँडेको छु । जनताको सुख दुखमा जान सक्ने नतालाई नै जनताले छान्ने हुन ।
वडाध्यक्ष, हिलिहाङ ७
हिलिहाङ ७ मा अव के हुन्छ ?
हिलिहाङ ७ का नागरिकले मलाइ विस्वास गरेर जिताउनु भयो । उहाँहरुको विस्वसलाई म सधै उच्च राख्दै काम गर्ने छु । यहाँको विभिन्न समस्याहरुलाई सहज रुपमा समधान गर्ननको लगी निरन्तर लागिरहने छुु । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी यतायतका क्षेत्रमा जतिपनि समस्या रहेका छन म सवै समधान गर्ने र उहाँहरुले दिएको मत खेर जान दिने छैन । मैले जुन कुराहरु भनेर भोट मागेको थिए ति सवै कुराहरु पुरा गर्ने बचन दिन चाहन्छु ।
गाउँकार्यपालिकामा तपाइ प्रतिपक्षको हिसावमा जाँदै हुनुहुन्छ कसरी सम्भव छ यो सव ?
साचो र सहि काम गर्नको लागी कहिले पनि अरुको साथ चाहिदैन । म जहिले पनि कंग्रेस, कम्युनिष्ट वा अरु दलका लागि काम गर्ने छैन । आगमी योजनाहरु व्यावस्थापन गर्ने क्रममा खानेपानी आयोजना पुर्ण रुपले सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहको छु । भारपामा कलेज स्थापना गर्नेको लागी मेरो पार्टी तथा अन्य सरकारी संस्थाहरुबाट सहयोग जुटाउन अग्रसर हुनेछु । म सवै बुद्धिजिवि, तथा अग्रज व्यक्तिहरुबाट सल्लाह लिएर अगाडी बड्ने छु ।
आगामी दिनमा चुनौतिहरु के देख्नु हुन्छ ?
यहाँको कुरा गर्दा स्थानीय सरकार दुई तिहाई भन्दा बढीको छ मैले राखेको विभिन्न क्षेत्रको समस्याहरु लैजाँदै गर्दा मैले विभिन्न प्रतिकुलताहरु भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो परिस्थिती आए म जनतामा जान्छु । मेरा योजना यस्ता छन भनेर सुनाउँछु । जनताले त्यसको पनि हिसाव लिनेछन ।